Fitsaram-bahoaka nahafaty polisy telo lahy: olona 18 naiditra am-ponja, omaly | NewsMada
Par Taratra sur 11/12/2018
Tanteraka, omaly tolakandro, ihany ny fanolorana ireo olona 19, voarohirohy tamin’ilay “Raharaha Ambodihazinina”, nahafaty ireo polisy inspektera telo lahy tamin’ny alalan’ny fitsaram-bahoaka, teo anatrehan’ny mpitsara mpanao famotorana, tany Toamasina. Naiditra vonjimaika am-ponja ny 18 amin’ireo olona 19 voarohirohy.
Nidoboka vonjimaika am-ponja, omaly hariva tamin’ny 6 ora sy 30 mn ao ao amin’ny Ambalatavoahangy, ny 18 amin’ireo olona miisa 19 (vehivavy iray nahazo fahafahana vonjimaika) voarohirohy amin’ilay raharaha famonoana polisy inspektera telo lahy tamin’ny alalan’ny fitsaram-bahoaka niseho tao an-tanànan’Ambodihazinina, fokontany Mahatsara, kaominina ambanivohitra Ambatoharanana, distrikan’i Fenoarivo Atsinanana, 24 oktobra 2018 lasa teo. Raha hiverenana ny zava-nitranga tao Toamasina, omaly, nigadona tao amin’ny lapan’ny Fitsarana ambaratonga voalohany, tamin’ny 3 ora tolakandro, ireo 19 mianadahy voarohirohy hiatrika ny mpitsara mpanao famotorana. Ny 3 desambra 2018 teo kosa, niantomboka nanao ny fidinana ifotony nanao ny fisamborana ireo ahiahina amin’ity raharaha vonoan’olona ity ny polisy sy ny zandary notarihin’ny lehiben’ny sampana misahana ny fikarohana ady heloka bevava eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ao Toamasina, ny chef d’escadron, Rajaohasina Délson Andrien, notronin’ireo polisin’ny Fip ao Toamasina.
Vory marobe ny olona teo anoloan’ny fitsarana…
Efa ny zoma 7 desambra 2018 teo no natolotra ny fampanoavana ity raharaha ity, saingy noho ny mbola ilàn’ny lehiben’ny fampanoavana eo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany Toamasina fotoana malalaka hamakiana ny antontan-taratasin’ady natolotry ny mpanao famotorana, nahemotra omaly 10 desambra 2018 tokony ho tamin’ny 9 ora maraina indray ny fanolorana azy 19 mianadahy voarohirohy amin’ity raharaha ity. Vory lanona marobe teo anolan’ny lapan’ny Fitsarana ny fianakavian’ireo mpitory rehetra. Toy izany koa ny fianakavian’ny voampanga amin’ity raharaha ity ary fahatelo ireo vahoaka te hanara-draharaha, feno hipoka ny tokotanin’ny fitsarana, omaly.
Tsy araka ny nieritreretan’ny maro azy anefa izany rehetra izany satria samy niala maina, ny tapak’andro maraina, tsy tonga teo amin’ny fitsarana ireo voarohirohy raha tsy ny tolakandro.